Mai Chibwe VekwaZimuto: Kurera vana
Mai Chibwe VekwaZimuto
Pano panotaugwa nyaya dzokugarisana mudzimba zvakanaka chete.
Kana mwana akazvagwa akakurira muimba ine rudo munoona achizoitwa munhu ane rudo kana awana mukadzi/murume wake. Vana vanodzidza kuita vabereki kubva kuvabereki vavo. Mukaona mwana ane hasha, zviri kubva kuvabereki. Mukaona murume/mukadzi anohura, zvakabva pavabereki. Munhu anoba, akazviona kumba kwavo. Zvizhinji zvatinoita zvinobva kuvabereki vedu. Mwana haazvagwi achizva chinhu anotodzidzira mumba.
Pane zvimwewo zvaunoona kuti anazvo asi zvange zvisiko kwavo. Izvi anenge azvidzidza kubva kushamwari asi zvabva pakuti haana kudzidziswa zvunhu zvune uremu navabereki vake achiri mwana mudiki.
Vanhu vakawanda vanopedza upenyu hwavo vachitsvaka rudo vasingaguwani. Kusahwisisa kuti ukapa umwe munhu rudo anokupawo rudo kana ari munhu akakana. Rudo gunotanga uri mwanana uchiiwa navabereki vako vese, kwete mi chete kana baba chete.
Vana vanhu vakachenjere zvokuti vanodzidza zvakawana kubva vari vadikidiki. Mwana achikura anokasira kuziva kuti zvinhu zvinokosheswa navabereki vake ndezvipi. Kana mugere mumba menyu, zvikuru muno muNgirandi. Unoona munhu aria sofa nembwa yake vana vari uko kwavo vega. Vakatanga kutaura vopopotegwa kwahi ndiri kuona nyuzi pa TV. Ipapo mukadzi agerewo kusofa rake ega. Ipapo mwana achikura anohwisisa kuti imbwa ndiyo inokosha mumba muno. Kana akachemedzwa anoenda kubedroom yake ondochema ariko asi vabereki varipo.
Kana muri mumba menyu baba namai vogara pa sofa rimwe vari vaviri vana vachiuya kuzogara pamakumbo ababa, amai vombindikigwa vofara vobva voenda kunotamba. Kukura kwavo vanoziva kuti baba namai vari pamwe. Kuchikoro vakahwa umwe achiti ndiri kunoona bhora nemukomana wamai vangu, vanotoshamisika kuti chinohi mukomana wamai chii?
Mwana akagumbuka akatanga kuchema unouya ochemera pamakumbo emubereki wake, ovaraidzwa kusvika anyarara ozobvunzwa kuti zvaita sei otaura zvaitika nyaya yogadziriswa.
Mubereki anoti koda kusviba wotora imbwa yake oenda nayo kufambafamba achiikandira bhora ichinotora ichiuya naro. Oita awa yese ariko, ozodzoka ada kuona TV vana haambotambi navo bhora kana kufambafamba navo. Vanokura vachidzidzswa chii ipapo. Kuzoti vava nemakore anosvika gumi nemaviri woona votopiwa makondhomu kuchikoro iwe wozomaonera mubhegi remabhuku. Kuti uchitaura naye kwahi mai muri OLD FASHIONED.
Baba name vanouya kumba vakadhakwa voita zvisina mature mumba vanavachiona. Muri kutodzidzisa vana zvokuzoita vakura. Kupopotedzana vana varipo moudzana mashoko akaipa. Tirongo akatuka mukadzi wake ane vanhu kwahi usandibvunza zvekuhura iwe. Ndakakuwana usiri mhandara saka hapana chaunokwanisa kundibvunza. Ipapo mukadzi ange atevera kumba kwehure ashaya munhu wekusiya vana naye ndokutevera navo. Murume otanga kupopota mukadzi ati Baba Mwana hendei kumba. Heee Handiudzwa kwekuenda nomukadzi ini. Unoda kundidherera.
Hure riya nava vakangoterera. Kana vana vakura vanozoitei nevavakaroorana navo? Mwana ngaakurewo asingatombozivi kuti baba namai vanombotukana.
Veduweeka, hakuna chinhu chinotyisa mwana panokufungira kuti baba namai vava kuda kurambana nokuti mai/baba vava noumwe munhu. Uya mubereki asara nevana uchavaudza kuti mai/baba venyu havachandidi. Vana vokura vachifunga kuti rudo ndegwetembarari.
Ukatarisa kuEurope ne North America unoona vanhu vakakurira mudzimba dzisina vabereki vaviri kana kuti vana vakanoitwa mubvandiripo kuti maitire avo akatosiyana nevamwe uye michato yavo haigari makore akawanda. Ivozve upenyu hwavo hune matambudziko akawanda. Rudo pakati pevabereki chinhu chikuru chose. Vana ndipo pavanodzidza kuti rudo chii.
Mumba kana ukanonoka kwauri kubva, unongofona kumba woti baba/mai boy ndabatikana nezvokuti . Usavata ndisati ndasvika pane yandakakurongera. Chirega nditaure nevana vasati vavata. Unotozosvika uchiwana kapu yekoko yakakumirira.
Kana pane kwaunoda kuenda, taura kuti ndichamboinda kwanhingi ndodzoka nguva yokuti. Chero ukazononokawo hako umwe wako anoziva kwauri.
Kukaita nhamo mumhuri garisa mhuri yako yese uvaudze kuti kwaita nhamo yokuti tobatira pamwe chete takadai. Vana vokurawo vachiziva kuti kunomboita nhamo asi tikabatira pamwe inoreruka. Ivo vana ivavo unombopotawo uchivabvunza mazano. “Ko nhai Mharidzo, kana nyaya ikadai uriwe ungaita sei nayo?” chiterera mwana achizama kurhizena nayo iwe uchibatsira uchibvunza mibvunzo inoita aone zvimwe zvokuita. Kana uchida kugadzira zvinhu amba sokuti uri kuda kuisa RoCKERY mugarden, gara asi nevana modhirowa mapikicha okuti inobuda yakadii. Zvoita sokuti mabatsirana kufunga. Vana vanokura vachiziva kuti kana tiri tese tinogona kuita zvakawanda.
Kufundumwara zvinomekwa nevana munhu woita vhiki yese akati kwindi sezizi radzinganiswa negondo. Hazvisizvo. Kana une nyaya nomurume/mukadzi wako gadzirisai ipere modzokera kurera vana venyu. Kana muchida kutukana tsvakai munhu anorera vana imi mopinda mumota yenyu monopopotedzana muri ku Layby modzoka matonhora.
Hama dzenyu ngadzibvumidzwe kuona vana. Iyi inyaya huru chose zvikuru kuno kunyikadziri kure kune hama shomanana.
Posted by Mai E Chibwe at 11:57
Bvunza mubvunzo wako
Kana pane mubvunzo wainoda kubvunza panyaya dzemagarire evanhu mudzimba, bvunza hako. Kana mhinduro ichikwanisika kuwanika tinopindura. Iwe wobva watora mhinduro iya wonozvinonera kuti yakakodzera here. Pamwe uchada kuwedzera mubvunzo wako, dzoka futi pano uwedzere as shandisa zita rawakamboshandisa tigoziva kuti ndiwe. Zata harina basa kuti wazviti unohi ani. Chero rawada ndiroro.
chinyora Zita rako:
Nyaya Dzinodiwa Nevakawanda
Mapedza Urume hunoendepi
Kuti Munhu ave ngochani chii?
zvipukanana zvinogara pamuviri
mukadzi asingatereri murume
Kutsvaka wekudanana naye
Kana uri kumwedzi murume achida
Saizi yechombo chomurume
Kuiswa une mimba
Mamirire Akaita Mukadzi/Murume
Kana Mune Nguva Yokuisana
Musikana Imhandara Here?
Kana Wada Mimba
Siyanisai Nzvimbo Nemaitire
Murume Kunonokera Mukadzi
Mukadzi Pakupiwa Urume anohwa sei
Basa Rebhinzi Yemukadzi
Kunonoka kudiridzira mukadzi wako
Kudhambha Kwechitubu Chomukadzi
Kuvhura Masuwo Emwana
Mukadzi Kutunda Pakuiswa
Murume wangu akandihurira noumwe murume
Kuno kuDiaspora takauya tisina madzitete. Takatombogara senherera ndokutozoona kuti zviri nani kukumbana pamwe chete toudzana zvatinoziva tese umwe noumwe tounganidza ruzivo gwedu tosimudzirana pamusoro. Ndiko muchiona kuti pano tinotaura pachena nyaya dzese dzomumba nenyaya dzebonde.
Tikaudzana nhema tinotadza kuvaka dzimba dzedu. Nyaya dzese dzinonyogwa pano dzinonyogwa kana munu abvunza mubvunzo. Kana une nyaya yaunoda kuti inyogwe, bvunza mubvunzo.
Kana une mubvunzo panyaya dzekugarisana mumba wonyorera kukero inoti maichibwe@yahoo.co.uk kana kubvunza pakahi COMMENT. Musazoisawo mazita chaiwo nokuti zvokutukanisa vanhu hatidi mudzimba. MaARTICLE ese epano anobva pamibvunzo yevanhu. Mubvunzo ukabvunzwa nevakawanda ndonyora nazvo pano
Nhema dzinoudzwa vanhu
1 Unokwanisa kuziva kuti musikana imhandara asina kukuudza.Hazviiti. Anokwanisa kukurongera nhema ukaita upenyu hwako hwese usingazivi kuti akakuudza nhema.
2 Kuzvibatsira (Jayamaoko/Mhandaramaoko) kunokonzeresa kusaita mwana.Idzi inhema chaidzo. Kuzvibatsira kunoitisa kuti uzive mashandire emuviri wako.
3 Kune mushonga wekukudza chombo. Hakuna zvachose. Nyika dzese dziri kutsvaka mushonga uyu asi hauko kwese.
4 Kune mushonga wekusunga mukadzi kuti asapindwa nechombo chisiri chako kana kusunga murume kuti asamira chombo noumwe mukadzi.Hakuna zvakadaro zvachose.
5 Chitubu chehure chakasiyana nechevamwe vakadzi. Idzi inhema chaidzo. Chitubu chomukadzi hachidhambhi nokupinzwa zvombo zvakawanda.
Rhoji = sex, kuvatana, kuisana. Vara iri rakatanga nemukomana ainzi Rhoja akamitisa vasikana vatatu ndokubva atiza oende Joni.
Chitubu = Pamberi pomukadzi paanopinzwa napo chombo panosinira sechitubu kana aita zemo, pobva panyorova murume opinza chombo chotsvedzerera chichipinda asi zvichinaka chose. Muromo wechitubu unozvimbirira chinzi yomira sezvinongoitawo chombo chomurume.
Chikapa: = Chikapa kukoira kwemukadzi achisimudzira chiuno nokuchitambisa pakugamuchira chombo chomurume chinenge chakapinzwa muchitubu make vachirhojana. Chikapa chinowedzera kunakigwa kwavo vese asi chinoda kuti mukadzi agare achipurakitiza kuti aite nyanzwi yazvo. Mukadzi anongorhojewa akati kwindi seakafa anohi haanaki.
Chombo: chomurume chinopinzwa pamukadzi kana chamira murume aita zemo. Kana akachipinza muchitubu chomukadzi akakoira mukadzi (kupinza nokubuda nokupinza nokubuda) anosvika pakubudisa urume huchipinda mumukadzi.
Hurume/urume = Murume akavata nomukadzi, akapinza chombo chake muchitubu chomukadzi, vakakoirana kwenguva, urume hunobuda muchombo hwopinda mukati memukadzi. Urume hunotakura mhodzi dzinoitisa mimba, zvichibva nokuti nguva yomwedzi yomukadzi iri papi. Urume =SEMEN. Mhodzi =SPERM.
Bhinzi (go**o pachikaranga) = chibhinzi chemukadzi chinoti twii kana ane zemo chinowanikwa nechapamusoro peburi reweti. Vakadzi vese tinoziva pane bhinzi. varume vasina kuchenjera havana basa nebhinzi. Munhukadzi ane bhinzi imwe chete.
Zemo = Kuhwa kuda rhoji mumuviri wako. Murume nemukadzi vese vanoita zemo. Zemo rine simba kupfuura fungwa zvokuti unokwanisa kupedzisira wavata nomunhu wausingambofungiri, iri ngari yezemo. Varume vanhu vanonetseka chose nezemo. Kana une murume garotapudza zemo rake nokumurega achikurhoja.
Pazemo, Bhinzi yomukadzi inomira matinji ozvimbirira, minyatso yomira, pamberi panoti nyevenyevenyeve, chitubu chonyorova. Ganda romuviri wese rowedzera kuda kubatwa.
Chombo chomurume chinomira. Mabhora ake okwira sooenda mudumbu.
Chihure:= Murume/mukadzi anovata nomunhu waasina kuroorana naye ari kuita chihure. Chihure chinouraya.
Munhu anokwanisa kuita hure kwenguva, ozoregera kana awana munhu wekuroorana naye, Asi murume akamboita hure zvinomunetsa kungozova nomunhu umwe chete. Varume zvinovanetsa kurega chihure
Kuchecheudza. Kuchekwa ganda rokumberi kwechombo kuti chimusoro chechombo chive pachena. KuNorth Africa Vakadzi vanochekwa bhinzi yese kubvisa kuti vasaita zemo zvichifungigwa kuti havazohuri. Zvese kuchekwa gana kana bhinzi hazvina zvazvinobatsira munhu. Kungotambisawo nguva.
Kuchemerera: Munhukadzi kana akapinzwa chombo zvinomunetsa kungonyarara nokuda kwemanakire azvo. Anoita seari kuchema asi zviri zvinyoronyoro.
Kudiridzigwa: Kana muchiisana panosvika nguva inoti murume anobudisa urume hwuchipinda mukati memukadzi. Urume hurihwo hunoitisa mimba kana mukadzi akandira zai nguva iri pedo nenguva yaanopiwa urume.
Mimba: pamuviri, Kubata mimba, kubata pamuviri, Unozoziva kuti wabata pamuviri kwatopera nguva wabata. Hapana chinoitika chichiratidza kuti wabata mimba musi iwoyo. Mimba inokwanisa kubatwa panguva inosvika mazuva matatu wapiwa urume, iri ngari yokuti urume hunogara mazuva matatu huri upenyu mukati memukadzi.
Kunyenga: PachiKaranga kunyenga kukumbira musikana waunoda kuti akudewo. Munotaurirana kusvika mabvumirana kudanana. Madaro musikana anoti akanyengwa nanhingi.
PaChizezuru ndinohwa sokuti vanoti kunyenga kuvata nomukadzi. Chatinoti kunyenga ivo vanoti kufimba. Izvi kwedu hazviko.
Chinonyanyonaka chii Bhinzi Kana Chitubu
Nyaya dzisingaiti zvachose
Kunonoka kudiridzira mukadzi
Kana mumba musina Rhoji
Kutanga wamitiswa Wozoroogwa
Munhu asina kusununguka newe
Kududzirana musati maroorana.
Ko sei vakadzi tichipfeka mabhurugwa
Nyaya yokuwacha mabhurugwa
Kusiyana nguva yokuvata
Kurhojana nomufaro kunorapa zvigwere
Mazita ekupanana mumba
Ndiani anotanga nyaya yeRhoji mumba
Kubatwa chibharo mumba (Rape)
Siyanisai Nzvimbo, Nguva, neMaitire
Kuvarume vedu, tererai nhasi
Chombo chakabhendha sebanana
Kurera mubvandiripo sewako
Kuona wako achitarisa vamwe
Kukwizana nemaoko ane mafuta anonhuwira
Kugeza mese mubhavhu kana shawa
Kangani pavhiki nomurume?
Kana mafigwa nomwana
Mai E Chibwe
Committed to my family. My ID is in my name and in my person of daughter, sister, wife, mother, friend, etc not in my profession, so I do not give my profession as my ID.
Zvinoitisa nyaya pano
Chii chinonzi mhandara
Mvura dzega dzega
Kubata murume zvakanaka
Kuvhura nzira yemwana
Mushonga wekumisa chombo
Kusura nokuzasi pakuvatana
Kuhwa kuda kuiswa nguva dzese
Kudya bhinzi yomukadzi
Kubata mimba uri kumwedzi
Kutadzi kubvisa humhandara
Kurera mwana asiri wako
Kuti murume asahura
kupfeka salt kuzasi
Kushandisa SALT kuzasi
Mukadzi ane magaro makuru
Murume anoda hure ihure
Kutsvaka murume wekudanana naye
Kutsvaka mukadzi wekudanana naye
Kunonoka kubata mimba
kudhonza matinji wakura
Kusvirwa nemboro diki kunonaka here
Kusabuda ropa pakubva humhandara
Mukadzi ane mimba
Kuzeya nyaya dzepabonde
Kuzeya nyaya dzemudzimba
Kuzeya nyaya naMai Chibwe
Kubva nhumbu isina mwedzi unogezwa chibereko here
Kududzira hope,,kurota mombe zhinji zvorevei
Mushonga wekuti mukadzi aite zemo
mwana anobuda sei mudumbu?
chii chinonaka pakusvirana
chii chinonaka pakusvirwa kana pakusvira
Mushonga wekusunga murume.
Mushonga wekusunga mukadzi
Kusvirwa nemwana wechikoro iwe uri ticha
Kusarudza munhu wekudanana naye